China inodaira kuvharwa kwemumiriri weUS kumaodzanyemba akadziva kumadokero kweguta reChengdu - teles
China inodaira kuvharirwa kwenhume yeUS kumadokero kweguta reChengdu
China yakaraira kuvharwa kwemumiriri weUS mudhorobha rekuchamhembe kwedhorobha reChengdu, mukukwirira kwegumi neimwe pakati penyika mbiri idzi.
China yakati danho iri rinopindura kuvharwa kwemumiriri weUS muHouston uye vakapomera vashandi veChengdu mhosva yekuvhiringidza zvinhu mukati mayo.
Secretary of State Mike Pompeo akati sarudzo yeUS yakaitwa nekuti China yaive "kuba" pfuma yehungwaru.
Kunetsana kwakakwira pakati peUnited States neChina pamusoro pezvinhu zvakakosha zvakati.
Mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, vanopesana kakawanda muBeijing pamusoro pekutengeserana nedenda rekorona, pamwe nekuiswa kweChina mutemo mutsva wekuchengetedza muHong Kong.
Washington neChishanu yakurudzira China "kumisa zviito izvi zvakashata pane kuzviitira kutsiva tit-for-tat."
Kufamba kweChina kwakauya kwemaawa mushure mekunge Pompeo abvisa izwi rake akatowedzera kutaura neChipiri muraibhurari yeaimbova Mutungamiriri, Richard Nixon, akashanya kuChina muna 1972 achizivisa nguva yekuvandudzwa kwezvinhu. hukama.
"Nhasi, China yakawedzera uye ichitungamira munyika yayo uye ichinyanya kurwisa ruvengo rwayo kurusununguko kwese kumwe," akadaro Pompeo.
“Nyika yakasununguka inofanira kukunda uhwu udzvinyiriri hutsva. "
China yakati chii?
Bazi rezvekunze neChina neChishanu rakati riri kuvhara mumiriri weU.S. kuChengdu mushure mekunge vashandi vepasi iro "vapindira mune zvemukati menyaya dzeChina uye vakaisa pangozi kuchengetedzwa nezvido zverudzi rwacho. China ”.
Pamusangano wevatori venhau, mutauriri weshumiro, VaWan Wenbin, vakatiwo iyo sarudzo yeAmerican yekuvhara mumiriri weHouston yakanga yakavakirwa pane "mishmash yenhema dzinopesana neChina".
Vati chiziviso chaVa Pompeo nemusi weChina "chakazadzwa nehusaruro uye mafungiro eCold War".
"Pompeo akapa hurukuro umo akatanga kurwiswa kwakashata kuChinese Communist Party," akadaro Wang, achiwedzera, "KuChina ino inotsamwira zvikuru uye vanopokana nekupokana."
muzvinambiriMumiriri weUS kuChengdu anoshandisa vanhu vanopfuura mazana maviri, vazhinji vacho vari vashandi veko
Ministry iyi yakambotaura kuti kuvharwa kwemumiriri weUS kuChengdu "yaive mhinduro uye yakakodzera" kumatanho akatorwa neUnited States.
"Zviripo nhasi pakati peChina neUnited States chimwe chinhu chisingadiwi neChina, uye United States ine mutoro wese." "
China yakapa United States kusvika Muvhuro kuvhara mumiriri weChengdu, sekureva kwemupepeti weGlobal Global Times.
Basa iri, rakatangwa muna 1985 uye parizvino richishandisa vashandi vanopfuura mazana maviri - zana negumi nevatorwa - rinoonekwa sewakakosha nekuti rinogonesa United States kuunganidza ruzivo nezveTibet Autonomous Region, uko kune kwenguva refu kumanikidzwa. yerusununguko.
Nei United States yakaraira kuvharwa kwemumiriri weChina?
NeChipiri, hurumende yeU.S. yakaraira China kuti ivharire mumiriri wayo muHouston, Texas, neChishanu.
Iyi danho yakauya mushure mekunge vanhu vasingazivikanwe vabatwa pane kamera inotsva pepa mumabhini pachivanze chivakwa.
Nhoroondo yevhidhiyoVarume vanoita firimu vachishandisa hose uye kuvhara matangi emarara paChinese Consulate muHouston
VaPompeo vakapomera China mhosva yekuba "kwete chete huchenjeri hweAmerica ... asiwo hupfumi hweEuropean ... ... inodhura mazana ezviuru emabasa".
"Isu tiri kuisa tarisiro yakajeka pamabatirwo achaitwa bato reChinese Communist Party." Kana zvisingaite, isu tichaita chimwe chinhu, ”akadaro.
Mumiriri weChina muHouston aive mumwe wevashanu vakasungwa muUnited States, pamwe nemumiriri muWashington DC. Hatizive kuti nei akasarudzwa.
Mutauriri weChinese Kunze kwenyika akati zvikonzero zvakapihwa neUnited States zvekuvhara kanzuru iyi "zvaisanzwisisika."
Hua Chunying akakurudzira United States kuti ishandise "sarudzo isiriyo", dai zvisina kudaro China yaizo "pindura zvine hunyanzvi".
Mune kumwe kusimuka kweAmerica, zvizvarwa zvina zveChina zvakapihwa mhosva yekubiridzira visa kwevanopomerwa kunyepa nezve nhengo yavo mumauto eChina. Vakuru veU.S. vakaudza vatori venhau neChishanu kuti mudzidzi weChinese akatizira kumumiriri weChina muSan Francisco pari zvino kuitirwa kuUnited States. Vamwe vatatu vakasungwa kare.
Kuparura, mumwe murume weSovietan akamhan'arira kudare redzimhosva muWashington kuita semumiriri weChina asiri muhurumende, VaJohn Demers, mutevedzeri wegweta rezvekudzivirirwa kwenyika, nemusi weChishanu.
Jun Wei Seo, anozivikanwawo saDickson Seo, akapomedzerwa kushandisa kwake zano rezvematongerwo enyika muUnited States kuunganidza ruzivo rwehungwaru hweChinese.
muzvinambiriMutungamiri weUnited States, VaDonald Trump nemumwe wavo wekuChina Xi Jinping
Zvakadiniko nezveHong Kong?
Kuiswa kweChina mutemo wekuchengetedza wakakura kuri kukonzerawo kushushikana neUS neUK, iyo yakatonga dunhu kusvika 1997.
Mukupindura, United States yakadzoreredza hunyanzvi hwekutengesa hweHong Kong svondo rapfuura , iyo yakaitendera kuti idzivise mutero wakatemerwa pane zvigadzirwa zveChinese neUnited States.
The US neUK vanoona mutemo wekuchengetedza seityisiro yerusununguko Hong Kong yainakidzwa pasi pechibvumirano che1984 China-UK - hutongi husati hwadzoka muBeijing.
UK yakatsamwisa China nekutsanangura nzira inoenda kugari yekuBritain kune vangangosvika mamirioni matatu eHong Kong vagari.
China yapindura nekutyisidzira kumisa kuziva mhando yepasipoti yeBritish - BNO - inobatwa nenhamba huru yevanhu vanogara kuHong Kong.
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53522640?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting- nyaya
Varume gumi vakatongerwa mhosva yekubatwa chibharo kuGerman
MATCHDAY: Zuva rekupedzisira rePremier League; Juve inogona kusimbisa zita